Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: DHADDEE LEENCA DHALTE!
Dubbiin tun waan dhugaafi qabatamaan hiriira guddaa Oromiyaa gaafa Hagayyaa 6, 2016 gaggeeffame waliin wal qabatee Harargetti uumameefi Maatii OPDO tan biraatiif fakkeenya gaarii taatuudha. Dubbiin akkana. Abbaan mucaa Taajir Shaamee jedhama. Taajir Shaamee OPDO guddaa tahuu daran ummata Oromoo kan biraa dhiisii nama obboleessa isaa kan gadaameessa tokkoo ABO dha jedhee ajjeessuun aangoo argatee hanga torbee muraasa duraatti Bulchaa Aanaa Dadar tahee waggaa hedduuf Oromoo miidhaa, ajjeessisaafi ilmaan Oromoo hiisisaa, dararaa ture tahuu isaa hedduun keenya ni beeyna. Ji'oota kurnan warraaqsi Oromoo finiinaa ture kanaas miidhaa inni ilmaan Oromoo irratti raawwachaa ture yeroo garagaraa miidiyaa hawaasaa irratti gabaasaa turuun keenya ni beekkama.
Eegaa akkuma Taajir Shaamee gocha hamaafi gara jabeenya hamaa kanaan yaadannu ilmi isaa Ibsaa Taajir jedhamu immoo seenaa ajaa'ibaa hojjachuun, fakkeenya guddaa tahuu daran abbaa isaas salphise. Guyyaan gaafa hiriira guddichaa Hagayya 6, 2016 irratti ture. Ibsaan adda duree tahee hiriira qindeessuufi meeshaafi waan barbaachisu mara qopheessuun qeerroo waliin hirmaate. Keessattuu alaabaa ABO gaafa hiriiraa tokko kan qabatee magaalaa Dadar keessatti qeerroo dura hiriire Ibsaa dha. Kaabinoota, poolisootaafi caasaaleen Bulchiinsa aanaa Dadar kan hiriira irratti alaabaa ABO Ibsaa Taajiir harkatti argan qabanii gara waajjiraa OPDO geessanii, qorachuu jalqaban.
Qorataaniis Ibsaaf gaaffii dhiheessuu jalqabe.
Qorataa: "Ibsaa! abbaan kee OPDO adda duree tahuu daran Bulchaa aanaa Dadar tahee ummata bulchaa jira. Atiis bu'aa dhaaba keenyaa keessaa tokko. Bu'aa DH.D.U.O tahuu daran dargaggoota dhaabni keenya guddiseefi fuula duraas abdatu keessaa tokko. Kana ta'ee osoo jiruu, ati immoo alaabaa shoorarkeessitootaa qabattee hiriira jeequmsaa jaarmaya farra misoomaa waliin baate. Mee alaabaa tana eessas fiddee qabattee hiriira baate?" Jedhee gaafate
Ibsaa: "Mana keenya irraahiin fide."
Qorataa: "Alaabasn ABO eessaa dhuftee mana keessan jirti? Eenyuutu si kenne?" jedheen.
Ibsaa: "Abbaa kiyyaatu guyyaa hiriira guddaatiif bitee fidee miikkaa keessatti maree siree duuba kaayee ture. Hiriirri arra waan taheef eda isaatu akkaan qabadhee bahuuf natti kenne." yoo jedhu gurbaan qorachaa jiru nahee ija babaase. Eega akka nama waa yaaduutti xiqqo cal'ise booda gaaffii isaa itti fufe.
Qorataa: "Abbaan kee eessaa fide"
Ibsaa: "Ani maalittiin beekaree? Isuma gaafadhaa." yoo jedhuun namtichi waan godhu dhabee dachiin marteen. Xiqqo booda mucaa kutaa kophaa geessee kasbinoota aanaa yaammatee, waan mucaan jedhe mara itti hime. Abbaa Ibsaa kan tahe Taajir Shaamee qoratamuu jalqaban. Koreen Godina irraa dhuftee qorannaan cime. Mariifi qorannaa jabaa booda "Taajir kophatti mucaa isaa dhimma kana haa gaafatu" jedhanii carraa laatamee. Taajiriis mucaa gaafachuuf murteessee gara kutaa mucaan jirutti dhaqe.
"Ilma kiyya maaliif akkana taata? Maaliif akkanatti na salphifta?" jedhee gaafate. Ibsaaniis nyaara guuree gaaffii abbaa isaa deebisuuf;
"Taajir ati abbaa naaf hin taatu. Ati Obboleessa kee ajjeefteeti Aangoo kana argatte. Ani immoo si ajjeeseetiin saba kiyyaa waliin bilisummaa argadha" jedhee abbaa salphise. Taajiir waan godhu wallaalee mataa buusaa jaratti deebi'e. Yoo gaafatan Taajir waan dubbatu wallaale. Kaabinoonni Godina irraa dhufaniis;
"Namni mana isaa irratti hojjachuu hin danda'in, kan maatii isaa sirreessuu hin dandeenye biyya bulchuu hin danda'u. Kanaaf Harargee keessaa aanaan Dadar baayyina guddaan hiriira bahe. Taajir Shaamee dadhabina hoggansaa guddaa qaba waan taheef aangoo irraa kaafamu qaba" jechuun murteessanii aangoo irraa fonqolchan.
Ibsaan Oromoo (maqaa abbaatiin yaamuuf dhaddeen leenca hin dhaltu, aniis kanaafiin Ibsaa Taajir jechuu didee Ibsaa Oromoo jedhe) haala kanaan qeerroo Magaalaa Dadar waliin hiriira bahuu daran injifannoo dachaafi seenaa gaarii galmeessuun yeroo ammaa qeerroo hedduu waliin aanaa Komnolchaa, Koolleejjii Qonnatti hidhaa jira. "Yaa Oromoo nama gantuu irraa dhalatee isin filate naaf kana nuuf simadhaa" jechuun qeerroo dadar irraa dhaamsi na dhaqqabe. Ani immoo dubbii tana gabaabumatti "Dhaddee leenca dhalte" jedheen ibse. Isin hoo maal jettu?